အချစ်အတွက် တယ်လီဖုန်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အဲဒီလူနာဆောင်ထဲ ကျွန်မရောက်သွားတဲ့နေ့ကစပြီး ကျွန်မနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကုတင်ကလင်မယားဟာ အသံတိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ရန်ဖြစ်ငြင်းခုန်နေတာကို ကျွန်မတွေ့ခဲ့ရတယ်။
မယားဖြစ်သူက ပြန်ချင်တယ်၊ လင်ဖြစ်သူက ဆက်နေမယ်။
နပ်စ်မရဲ့ပြောချက်အရ အဲဒီကုတင်ကအမျိုးသမီးဟာ ဦးနှောက်အကြိတ်ပေါက်ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့လင်မယားရဲ့ ပြတ်တောက်ပြတ်တောက်ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်တဲ့စကားသံထဲကနေ တောရွာတစ်ရွာနေ လယ်သမားမိသားစုတစ်စုရဲ့ပုံရိပ်က ကျွန်မမျက်စိရှေ့မှာ
ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက ၄၆နှစ်ပါ။ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပြီး သမီးဖြစ်သူက မနှစ်ကတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ထားတယ်၊ သားဖြစ်သူက အထက်တန်းတက်နေတယ်။ လယ် ၁၂ဧကရှိတယ်၊ ဝက်၆ကောင်နဲ့ နွားတစ်ကောင်ရှိတယ်။ ဒါဟာ သူတို့တစ်မိသားစုလုံးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်သမျှဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံဝရံတာမှာ ကတ်ထည့်ပြီးဆက်လို့ရတဲ့ တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့လူနာခန်းနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါများလာတဲ့အတွက်
အဲဒီကတ်ထည့်တဲ့ဖုန်းကို လူတွေသိပ်မသုံးကြတော့ပါဘူး။ ဆေးရုံအောက်ထပ်မှာ ဖုန်းကတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှိပါတယ်။ ညနေရောက်တိုင်း လူနာရှင်အမျိုးသားဟာ အဲဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့ ရွာက နေအိမ်ဆီဖုန်းဆက်တတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဖုန်းပြောတဲ့အသံက အရမ်းကျယ်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးကို သူတကူးတကပိတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် အခန်းထဲကနေ သူ့အသံကို ပီပီသသကြားရပါတယ်။
နေ့တိုင်းဖုန်းပြောတဲ့အခါတိုင်း အမျိုးသားက သူ့သားကို နွားစာကျွေးပြီးပြီလား၊ ဝက်စာကျွေးပြီးပြီလား၊ ခြံဝင်းတွေခတ်ထားရဲ့လား၊ နောက်နေ့မနက်ကျောင်းတက်ရမှာမို့
ညဉ့်နက်တဲ့အထိ စာမကြည့်နဲ့လို့ မေးလိုက် မှာလိုက်လုပ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပြောနေကျစကားတစ်ခွန်းဖြစ်တဲ့ "နင်တို့အမေ ဘာရောဂါထွေထွေထူးထူးမှမဖြစ်ဘူး၊ ၃,၄ရက်နေရင် ငါတို့ပြန်ခဲ့မယ်"ဆိုတဲ့စကားနဲ့ သူအဆုံးသတ်ပါတယ်။
ဆေးရုံရောက်ပြီး ၄ရက်မြောက်နေ့မှာ အမျိုးသမီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုခွဲစိတ်ဖို့ ဆေးရုံကပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ခွဲစိတ်မယ့်မနက်မှာ အမျိုးသမီးရဲ့ကုတင်ရှေ့မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကြည့်ရတာ သူ့အစ်ကိုနဲ့ ညီမဖြစ်ပုံရတယ်။ အမျိုးသမီးက ညီမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မျက်လုံးက သူ့ယောက်ျားရဲ့မျက်နှာကနေကို မခွာခဲ့ပါဘူး။
မေ့ဆေးပေးခါနီးမှာ အမျိုးသမီးက အမျိုးသားရဲ့လက်မောင်းကိုဖမ်းဆွဲပြီး "ယောက်ျား.. တကယ်လို့ ခွဲစိတ်ကုတင်ပေါ်ကနေ ငါဆင်းမလာနိုင်ခဲ့တော့ရင် ငါ့ကို အိမ်နောက်က တောအုပ်ထဲမှာမြှုပ်ပေးရင် ရပြီ။ တခြားဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး.. ပိုက်ဆံအကုန်ခံနေစရာ မလိုဘူးနော်၊ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ငါ့စကားကို ရှင်နားထောင်ပေးနော်" လို့ အသံတုန်တုန်နဲ့ ပြောတယ်။ မျက်ရည်တွေ သူ့ပါးပြင်ပေါ် ဝေါခနဲကျလာပါတယ်။
"အင်း.. ဒါကို နင်မပူပါနဲ့"လို့ အမျိုးသားက ဆိုတယ်။
လင်းလက်တဲ့အရည်တချို့ အမျိုးသမီးရဲ့သွေးကြောထဲ ဝင်ရောက်သွားတာနဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့မျက်ခွံတွေ ပျော့အိကျလာပါတယ်။ အမျိုးသားရဲ့မျက်နှာပေါ်က ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းလာပါတယ်။
နပ်စ်က အမျိုးသမီးကို တွန်းသွားတယ်၊ အမျိုးသားနဲ့ ကျန်တဲ့၂ယောက်လည်း လိုက်သွားတယ်။
တအောင့်နေတော့ အမျိုးသားကို အမျိုးသမီးရဲ့အစ်ကိုကဆွဲပြီး ပြန်လာတယ်။ အမျိုးသား ထိုင်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ထရပ်တယ်၊ ပြန်ထိုင်တယ်၊ လက်တစ်ဖက်က ကုတင်ခေါင်းထောင့်စွန်းကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။
"အစ်ကို... မြအေးရဲ့ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်နော်" အမျိုးသားက အမျိုးသမီးရဲ့အစ်ကိုကို စူးစိုက်ကြည့်ပြီး မေးတယ်။ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ အကူအညီမဲ့တဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့အရိပ်တွေ ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
"ဆရာဝန်က ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့.. စိတ်ချစမ်းပါ" အစ်ကိုက အမျိုးသားကိုနှစ်သိမ့်လိုက်တယ်။
မိနစ်၂ဝအကြာမှာ အမျိုးသားက အခန်းအပြင်ဖက်ထွက်သွားတယ်။ တအောင့်နေတော့ အမျိုးသမီးရဲ့အစ်ကိုက ဆွဲခေါ်လာပြန်တယ်။ အဲဒီလို ထသွားလိုက် ပြန်ဆွဲခေါ်လာလိုက်နဲ့ ၅ခေါက် ၆ခေါက်လောက်လုပ်ပြီးချိန်မှာ လူတွေဝန်းရံတွန်းလာတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့လူနာတင်ကုတင်က အခန်းထဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းမှာ ပတ်တီးဖြူဖြူစည်းထားတယ်။ မျက်နှာက ဖျော့တော့ဖြူရော်နေတယ်။ မျက်လုံးက သာသာလေးမှိတ်ထားတယ်။ အိပ်ပျော်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
အမျိုးသမီးကို အပြေးအလွှားနေရာချပြီးတဲ့နောက် အမျိုးသားက အပြင်ကိုထွက်သွားပါတယ်။ တခဏလောက်နေတော့ လက်ထဲမှာ အထုပ်တစ်ထုပ်ဆွဲလာပါတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် မန်ထို ၃လုံးနဲ့ တစ်နပ်ဖြေရှင်းလိုက်တတ်တဲ့အမျိုးသားက ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ပေါက်စီတွေအများကြီး ဝယ်ပြန်လာပါတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့ အစ်ကိုနဲ့ညီမကို များများစားပါလို့ဧည့်ခံပြီး သူက ပေါက်စီနှစ်လုံးကို ရေနွေးတစ်ခွက်နဲ့မျောချလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီညနေမှာ အမျိုးသားဟာ မေ့သွားလို့ပဲလား၊ တခြားအကြောင်းကြောင့်ပဲလား မပြောတတ်ဘူး.. အိမ်ကို သူဖုန်းမဆက်ခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီညမှာ လူနာအခန်းက မီးထိန်ထိန်လင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ညသန်းခေါင်မှာ ကျွန်မအပေါ့ထသွားတော့ အမျိုးသားဟာ အမျိုးသမီးရဲ့ကုတင်ခေါင်းရင်းမှာထိုင်ပြီး
ကျောက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို တုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘဲ အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုပဲ စိုက်ကြည့်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
နောက်တစ်နေ့ နေ့လယ်မှာ အမျိုးသမီးနိုးလာပါတယ်။ စကားပြောလို့ မရသေးပေမယ့် အမျိုးသားကိုပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်။ အမျိုးသားက ဝမ်းသာအားရလက်နှစ်ဖက်ကို ပွတ်သပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆေးရုံအောက်ပြေးဆင်းပြီး ချိုချဉ်တွေဝယ်လာပါတယ်။ အဲဒီချိုချဉ်တွေကို ဆရာဝန်နားနေခန်းဆီသွားပေးလိုက်၊ နပ်စ်နားနေခန်းဆီသွားပေးလိုက်၊ ပြီးတော့ ကျွန်မနဲ့ ဘေးကကုတင်တွေကို လိုက်ဝေပါတော့တယ်။
အမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေက ကြည့်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင်ဖုံးဖြုတ်လိုက်တဲ့နေ့မှာပဲ အိမ်ပြန်မယ်လို့ သူစပူဆာပါတော့တယ်။ အမျိုးသားက ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ချော့နေသလိုမျိုး အမျိုးသမီးကို မပြတ်ချော့နေပါတယ်။ သူမြင်ဖူးသမျှ၊ ကြားဖူးသမျှအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကိုပြောပြနေပါတယ်။
အရာအားလုံး အရင်အတိုင်းပဲ ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညနေရောက်တိုင်း အမျိုးသားက ဝရံတာနားက ကတ်ထည့်တယ်လီဖုန်းဆီသွားပြီး ရွာအိမ်ဆီဖုန်းဆက်ပါတော့တယ်။ သားဖြစ်သူကို မရပ်မနား ဟိုမှာဒီမှာလုပ်ပါတယ်။ သူ့အသံက ကျယ်မြဲကျယ်လျက်ပါပဲ။ မှာနေကျစကားကလည်း အဲဒီစကားတွေပါပဲ။ အပ်ကြောင်းထပ်မကပြောနေတဲ့ စကားတွေကို ကျွန်မတောင်အလွတ်ရနေပါပြီ။
တစ်ညနေမှာ ရေချိုးခန်းကနေ ကျွန်မထွက်လာတော့ အမျိုးသားကို တယ်လီဖုန်းဘေးမှာ တွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်။ သူ့အသံအကျယ်ကြီးနဲ့ "နွားကို တစ်နေ့အစာတစ်ခါပဲ ကျွေးရင်ရပြီ။ ဆောင်းတွင်းမှာ အလုပ်မခိုင်းတော့ နွားကဗိုက်နည်းနည်းဆာလည်း ကိစ္စမရှိဘူး။ ဝက်ကိုတော့ အစာကောင်းကောင်းကျွေးနော်.. အလေးချိန်ပြည့်တာနဲ့ ငါတို့ဈေးကောင်းရအောင် ရောင်းလို့ရတယ်။ နင့်တို့အမေ သက်သာလာတာမြန်တယ်။ ဆရာဝန်က နောက် ၃,၄ရက်နေရင် ဆေးရုံဆင်းလို့ရပြီပြောတယ်" လို့ အော်နေပြန်ပါတယ်။
အမျိုးသားက သူပြောလိုရာကို ပြောနေပါတယ်။ ကျွန်မက သူ့ကို မျက်တောင်မခတ်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျွန်မတအံတသြ သတိထားမိလိုက်တာက
ဖုန်းချပြီး အမျိုးသားခေါင်းထောင်လာချိန်မှာ တအံ့တသြဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မကို သူမြင်သွားပါတယ်။ ကျွန်မက ဖုန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြမှ ဖုန်းထဲ သူဖုန်းကတ်ထိုးထည့်မထားဘူးဆိုတာကို အမျိုးသားက သိသွားသလိုပါပဲ။
"ရှူး....." အမျိုးသားက ချက်ချင်းပဲ လက်ညှိုးကို သူ့နှုတ်ခမ်းပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကို အသံမထွက်နဲ့လို့ ပြလိုက်တာပါ။
"ကိုအုံးမောင်.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ အိမ်က ဝက်နဲ့နွားကို စိတ်မပူတော့ဘူးလား" လို့ ကျွန်မအသံတိုးတိုးနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ်။
"ခွဲစိတ်ခအတွက် ဝက်နဲ့နွားကို အစောကြီးကတည်းက သူ့အစ်ကိုရောင်းလိုက်ပြီ.."လို့ အသံနိမ့်နိမ့်နဲ့ သူဖြေတော့ ကျွန်မက လျှာလေးထစ်ပြီး လူနာခန်းဖက်ဆီ လက်ညှိုးထိုးပြမိလိုက်တယ်။
အဲဒီတခဏမှာ အရာအားလုံးကို ကျွန်မသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ အမျိုးသားဆက်တဲ့ဖုန်းက အိမ်ကသားတွေဆီဆက်တဲ့ဖုန်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး... လူနာကုတင်ပေါ်က သူ့အမျိုးသမီးကို "ဆက်"ပေးတဲ့ ဖုန်းပါ။ ကျွန်မရဲ့နှလုံးသား တဆတ်ဆတ်တုန်လှုပ်နေပါတယ်.. သူ့အတွက်၊ သူ့အမျိုးသမီးအတွက်.. သူတို့ရဲ့အချစ်အတွက် ကျွန်မနှလုံးသား ခုန်နေခဲ့ပါတယ်။
လောကမှာ လူကို ဒီလိုခံစားသက်ဝင်စေတဲ့ အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှိနေသေးပါလား၊ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့နှင်းဆီပန်းတွေ၊ ကမ္ဘာရှည်တည်မယ့် ကတိသစ္စာတွေမရှိခဲ့ပေမယ့်
သူတို့ရဲ့အချစ်ဟာ အချိန်နေ့လရက်တွေဖြည်းဖြည်းချင်းစုပုံပြီး သင့်မြတ်သင့်လျော်တဲ့၊ နွေးထွေးတဲ့၊ သက်ဆုံးတိုင်အတူတကွရှိနေမယ့် မှတ်တိုင်တစ်ခုကို စိုက်ထူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးလေးနက်တဲ့ အကြင်နာမေတ္တာတွေဟာ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး နေ့ရက်တိုင်းမှာသက်ဝင်ရင်း လူ့လောကမှာ အလှဆုံးအမွှေးဆုံး အချစ်ပန်းကို သူတို့ပွင့်လန်းစေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချစ်ပန်းက သာမန်ရိုးစင်းပေမယ့် လူတိုင်းရဲ့ ရိုးတွင်းချဉ်ဆီအထိ သင်းပျံမွှေးကြိုင်စေခဲ့ပါတယ်။
မူရင်းရေးသားသူ -- Zhu Sha (朱 砂)
မူရင်း-- ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် အမှတ်စဉ် ၁၅ Readers မဂ္ဂဇင်းမှစာတစ်ပုဒ်ကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန်ပါတယ်။
နိုင်းနိုင်းစနေ (April. 12. 2014)